Halkii la filayay in beesha caalamku cadaadis saarto dhinacyada is diidan ee soomaalida, waxaa hadda soo baxaya in Madaxwayne Farmaajo uu iyagii cadaadis saarayo - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalHalkii la filayay in beesha caalamku cadaadis saarto dhinacyada is diidan ee soomaalida, waxaa hadda soo baxaya in Madaxwayne Farmaajo uu iyagii cadaadis saarayo
March 26, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 2
Janan oo Ku dhawaaqay 30 Baabur Dagaal Dowlada ku Wareejiyey iyo 500 Askari
“Farmaajaa Qaramada Midoobay Cadaadis Saaraya” – waa hadal aad looguqoslo runtii. Toloow ma majaajilada jimcaha ayaa loogutalagalay?
Farmaajo igmasho rasmi ah hadda mahaysto, dowladduna waa mid laalan sideedaba marka shuruucda, xeerarka, qawaaniinta, iyo baratakoollada dawliga ee caalamiga lalatiigsado.
Hadduu Farmaajo ismoodsiiyay inuu maleeshiyada beelo Weligoodba laga xadaaradsanaa oo siyaasadda iyo diblumaasiyadda lagaga ilbaxsanaa ee tuutaha “ciidanka qaran” loolabbisay ayuu madaxweyne kusii ahaanayaa, isaga ayaa kuqasla’ xaqiiqdii.
Dhaaxaa hortii sixun loogu hungoobay kaartada jilicsan ee beelaha iska muddeeca ah inta askarnimo lagu kireysto, la iskudayo in beelaha kale ee xadaaradda usaaxiibka ah sha’nigooda laguwiiqo markay dawlad xumo diidaan.
Beelahan lakireystana waa ciilqabeyaal weligood kuwaas kale ilbaxnimadooda kaxumaa oo kahinaasnaa, qiil iyo meel ay usomaraanna la’aa. Soomaali dhexdeeda la iskujabiyo madaxweyne iyo dawlad dhab ah laguma noqdo sideedaba, casrigii dad wax aynaan rabin oo raalli ku ahayn qori caaraddii lagu oggolaysiin jiray waa horaa lagasoo gudbay.
Dan buu Farmaajo qarow-maalmeedka kelitalisnimo ugasoo hambobari oo waaqiciga dhabta ah indhaha kukalaqaadi, mar aan fogayn.
Waxaan dhowr goor arkay qaar aniga la igu dowgalay oo kuhadaaqaya in ayan qoraallayda fahmin, sidaas aawadeedna aanan anigu Afsoomaaligaba aqoon ulahayn. Niman aynu saaxiibbo nahay ayaa qossol rakaaday mar ay arkeen.
Dabcan Soomaalidu, sida aadmiga intiisa kaleba, way kala lahjado iyo laqbado duwantahay oo islamarkaana dadka Afsoomaaliga wax kuqoraa waa kala tacbiir sidoodaba.
Luqad kasta oo ay noqotoba, dadku way kukala xariifsanyihiin oo way dhacdaa in dadka qaarkii aanu badda luqadeed weli wax kasoodhaansanin, sidaas ajligeedna ay erayada iyo istilaaxaadka badankood ka arradanyihiin, halka qaar kalena ay kudabaashaan maadaama ay fursaduhu usaamaxeen.
Ruuxa luqad ahaan iyo aqoon ay ahaataba adiga wax kudheer, waa loogu duceeyaa ee lagama hinaaso oo laguma caayo. Sidaasaa Islaamnimada iyo ilbaxnimadaba waafaqsan.